FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA STAGHOUND - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Staghound
Ohatra iray amin'ny 'shag' Staghound, sary natolotr'i Running Sage Staghounds
Ny American Staghound dia tsy ekena ho karazany, fa karazana sighthound izay ampiasaina hanenjehana (course) karazan-karoka (lalao) isan-karazany. Na dia tsy ekena ho toy ny karazany aza izy io, ny 'tsipika' sasany dia niara-nitombo kokoa noho ny sasany ankehitriny. Ny fomba tsara indrindra anehoana an-tsary ny American Staghound dia ny fampifangaroana ny toetran'ny Scottish Deerhound sy ny Greyhound. Ity dia alika mihazakazaka miaraka amin'ny toetra ara-batana izay azo antsoina hoe prototype Greyhound. Manana tongotra lava, tratra lalina ary hozatra matanjaka. Ny Staghound dia manana fahitana tsara amin'ny fahitana, ary ny sasany nompiana noho ny fahaizany manitra mandritra ny làlana. Hita ao amin'ny karazana loko na loko loko hita ao amin'ny Greyhound sy Scottish Deerhound. Misy karazany telo ny palitao: ny 'shag', izay mitovy kokoa amin'ny Scottish Deerhound hoe 'slick', izay mitovy kokoa amin'ny Greyhound sy ilay 'tapaka', izay eo anelanelan'ny roa. Ny American Staghound dia manana ny toetra ara-batana sy ara-tsaina ilaina amin'ny fihazakazahana ny toeram-pitrandrahany. Fantatra amin'ny fananany hafainganam-pandeha izay manatona ny Greyhound iray, fa tsy toy ny Greyhound, misy santionany manana faharetana mahatalanjona.
Ny Staghound dia milamina tokoa manodidina ny trano. Maniry ny sain'ny olombelona izy ary tena tia ny tompony. Na dia alika ampiasaina indrindra amin'ny alàlan'ny fanaovana kerobima aza ity alika ity dia manao namana mahafinaritra ny American Staghound. Tao anatin'izay taona lasa izay dia toa liana bebe kokoa amin'ny Staghound ho toy ny biby fiompy. Tsara amin'ny ankizy izy io, fa ny habeny dia mety hiteraka olana amin'ny tanora. Ny ankamaroan'ny Staghounds dia mpiambina mahafinaritra noho ny fahitan'izy ireo tsara, saingy tsy mpiambina na mpiaro izy ireo. Haingam-pandeha ny staghounds fa tsy mampihetsika be. Ho an'ny olona sasany, ny Staghound dia toa somary kamo ihany ao an-trano rehefa matotra. Tsy misy toa azy ny instime amerikana ao amin'ny Staghound amerikana, ka izay rehetra mihazakazaka dia azo heverina ho «quarry». Any an-tsaha ity alika ity dia be herim-po, be fikirizana ary tena tapa-kevitra ny hanao zavatra avy amin'i a bitro amin'ny serfa. Ny Staghound dia miompana amin'ny fonosana ka mety hanaiky alika hafa fantany izy, fa ny biby fiompy toy ny saka dia fanamby izay mety tsy ho resena, na izany aza ny Staghound hafa dia miaina am-pifaliana miaraka amin'ny saka. Ireo staghound mandritra ny tantara dia namboarina ho an'ny tanjona iray, TO HUNT! Ireo mpihaza tsara indrindra ihany no entina, ka na ny alikakely alefa ao an-trano aza dia mitombo ho lasa fihazana mihombo be. Ny ankamaroan'ny Staghound dia ampiasaina amin'ny fihazana biby mpihaza fa tsy haza. Raha tokony hihaza zavatra toy ny bitro tsy hiady rehefa tratra izy ireo dia mihaza zavatra toy ny coyote mihetsika toy ny buzzsaw dia rehefa tratra. Tsy maintsy saro-kenatra izy ireo rehefa tsy misy mpanara-maso na mihazakazaka. Mitaky penina manokana izy ireo mba hitazomana azy ireo tsy hitovy amin'ireo biby hafa rehefa tsy afaka manara-maso ny tompony. Ny tanjona amin'ny fampiofanana an'io alika io dia ny hahatratra ny toeran'ny mpitarika pack . Voajanahary voajanahary ho an'ny alika ny manana baiko ao anaty fonosany . Rehefa miaina miaraka amin'ny alika isika olombelona dia lasa fonosin'izy ireo isika. Ny fonosana iray manontolo dia miara-miasa amin'ny mpitarika tokana. Voafaritra mazava ny tsipika. Ianao sy ny olombelona hafa rehetra TSY MAINTSY avo kokoa amin'ny filaharana noho ny alika. Izay no fomba tokana hahombiazan ny fifandraisanareo.
Alika kely mpanao ady totohondry 2 volana
Haavony: Lehilahy 26 - 32 santimetatra (66 - 81 cm) Vehivavy 24 - 29 santimetatra (61 - 74 cm)
Milanja: Lehilahy 55 - 90 pounds (25 - 41 kg) Vehivavy 45 - 85 pounds (20 - 39 kg)
Tsy misy olana ara-pahasalamana fantatra. Nihalehibe nandritra ny taranaka maro tsy tambo isaina ho an'ny asany ny Amerikanina Staghound dia salama tokoa. Noho ny isan'ny isan-jaton'ny tavy matavy amin'ny muscle, ny Staghound dia mora tohina amin'ny fanatoranana. Tsy tokony hihazakazaka aorian'ny fihinanana ampahany betsaka amin'ny sakafo noho ny torsion bla olana .
Tsy alika fonenana, fa afaka mahomby amin'ny toerana an-tanàn-dehibe raha omena fotoana hanaovana fanatanjahan-tena ao amin'ny tokotanin'ny fefy na an-tongotra. Mety indrindra ho an'ny ambanivohitra. Ny fahasamihafana shag dia afaka mihaona amin'ny toetr'andro mangatsiaka, raha toa kosa ny silipo dia mila fiheverana bebe kokoa mandritra ny ririnina mangatsiaka. Atao any ivelany ny ankamaroany, fa aleon'ny rehetra ny fampiononana ao an-trano.
Ny Staghound dia mitaky fanazaran-tena isan'andro mba ho matotra ara-batana sy ara-tsaina. Miaina ny mihazakazaka ary tokony hanana toerana hitsoahana malalaka. Ny Staghound dia ho mpiara-miasa tonga lafatra ho an'ny olona mihazakazaka na mandeha bisikileta matetika, mieritreritra fa mihoatra ny 12 volana ny alika. Aza atao amboa loatra ny alika izay 12 volana sy ambany satria mbola mivoatra ny taolany. Mandehandeha isan'andro dia ilaina mba hanomezana fahafaham-po ny sain'ny kaninina.
amerikana pitbull terrier mainty sy fotsy
12-14 taona na mihoatra raha karakaraina tsara. Tantara iray marina sy voamarina iray momba an'i Staghound manokana no nilaza fa misy lehilahy manana sisin-tany roa amin'ny 16 taona!
Alika kely 6-10
Fanosorana tsindraindray fotsiny indraindray, miankina amin'ny karazana palitao.
Ny American Staghound dia vokatry ny taolam-paty Scottish Deerhound sy Greyhound tsy fantatra isan-jato génétique. Amin'ny ankabeazany, ny Staghound dia nateraka Staghound ho Staghound nanomboka tamin'ny taona 1800, fa ny alika Greyhound / Deerhound alika voalohany kosa dia mbola ampiana ilay karazany. Tsy razambe mivantana an'ny madio izany Scottish Deerhound niampita tamin'ny madio Greyhound . Rehefa nipetraka i Amerika, ny Greyhound, Scottish Deerhound, ary angamba ny hazo fijalian'izy ireo dia nahita ny lalan-kaleha nankany amin'ny Tontolo Vaovao. Ny quarry Coursing dia nampiasaina ho an'ny fanatanjahan-tena, sakafo ary volom-borona. Sambany hatramin'izay, ny coyote dia alefa miaraka amin'ny alika mandositra. Ny alika fitsangatsanganana dia nampiasaina ho an'ny amboadia any amin'ny firenena hafa ary koa any Amerika, saingy nametraka fanamby vaovao ilay coyote. Haingam-pandeha kokoa noho ny amboadia ny coyote, ary milanja ady an-kilao mahery toy ny amboadia. Nandritra ny fandaminana sy ny fanitarana miankandrefana dia hita fa ny hazo fijaliana teo anelanelan'ny Greyhound tena haingana sy tsara tarehy niaraka tamin'i Scottish Deerhound izay matanjaka kokoa dia nanome biby goavambe tsara ampiasaina amin'ny coyote amin'ny faritra sarotra. Ny Scottish Deerhound dia nanome ihany koa ny palitaony maranitra sy ny fahaizany manafotra tsara kokoa. Staghound dia nateraka tany Staghound ary matetika dia nesorina manokana noho ny toetra izay naniry ny fikatsahana coyote. Taranaka an-jatony vitsivitsy amin'ity karazana fiompiana ity no nahatonga ny antsoin'ny maro ho tandindon'ireo fitsangatsanganana coyote-coursing. Raha ny tena izy dia teraka ny American Staghound. Ny jeneraly George A. Custer dia nampiasa ny Staghound ho ampahany amin'ny alika alika nampiasàny tamina karazana biby amerikana avaratra. Ny Staghound dia teo am-pelatanan'ny mpihaza foana, ary tsy manan-jo hanenjika quarry amin'ny alika mihazakazaka dia handeha i Staghound lany tamingana .
Ny Staghound amerikana dia tsy ekena ho toy ny karazany, na dia efa ela kokoa noho ny sasany amin'ireo karazana maoderina ekena aza izy io. Nambolena ho an'ny asany hatrany izy io fa tsy ho an'ny karazany. Tsy misy fari-pitsipika momba ny fiompiana, ary amin'izao fotoana izao dia tsy misy hetsika hanosehana ny Staghound ho fanekena ny karazany. Ny ankamaroan'ny mpihaza dia mino fa ny Staghound dia tokony avela tsy ekena ho toy ny karazany ka hotehirizina ho toy ny biby mikarakara asaina izy io fa tsy aseho.
Ity no Cruiser. 73 cm (73 cm) ny halavany.
Rosa the American Staghound ao anaty lanezy
Staghounds dia tokony hisaron-tava amin'ny harona rehefa mihazakazaka amin'ny fehikibo (irery na amin'ny biby hafa?) .... Irery, satria tsy fantatrao mihitsy hoe oviana ny alikan'olon-kafa no ho tonga tsy ho eo intsony ... Miaraka amin'ny biby hafa satria hanenjika na dia ny alika hafa miara-monina aminy aza.
Ny Staghound dia mety naman'ny saka, fa ity alika ity ihany izay matory miaraka amin'ny saka dia mbola hanenjika sy hahafaty saka na alika ihany. Izy io dia manana hery voajanahary mafy hanenjika sy hamono ireo zavatra mandeha. Ny staghound dia tsy ratsy fanahy rehefa manenjika sy mamono fa manaraka ny toe-tsain'izy ireo fotsiny.
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ny Staghound
Sary Staghound 1
Fampahalalana avy amin'ny Running Sage Staghounds-Glen Kansanback
hiaraka ve ny alika lahy roa
pics ny yorkie poo alika kely
spaniel akoho mifangaro amin'ny retriever volamena
inona ny atao hoe isabella dachshund